गिटी-बालुवाको भाउ घट्यो, एक तले घर बनाउन कति लाग्छ खर्च? :: Setopati
गिटी-बालुवाको भाउ घट्यो, एक तले घर बनाउन कति लाग्छ खर्च?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, चैत २२
घर तथा संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने गिटी-बालुवाको भाउ घटेको छ। गत माघको तुलनामा धादिङको कालो गिटी, सेतो गिटी र डबल-वास बालुवाको मूल्य अहिले कम भएको क्रसर उद्योग महासंघका महासचिव पुरुसोत्तम रेग्मीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कालो गिटीमा प्रतिटिपर तीन हजार रूपैयाँ कम भएको छ। दुई महिनाअघि २९ हजार रूपैयाँ प्रतिटिपर पर्ने कालो गिटी अहिले २५–२६ हजार रूपैयाँ प्रतिटिपरमा निर्माणस्थल (काठमाडौं उपत्यका) मै आइपुग्छ। सेतो गिटीको भाउ पनि अहिले २०–२१ हजार प्रतिटिपर छ। कालो गिटीको तुलनामा सेतो गिटी ४–५ हजार रूपैयाँ सस्तोमा पाइन्छ।
डबल-वास बालुवामा पनि प्रतिटिपर एकदेखि दुई हजार भाउ घटेर २६–२७ हजारमा निर्माणस्थलमै पुग्ने उनले बताए। गतवर्ष कोरोनाअघि बालुवाको मूल्य ३२ हजारसम्म पुगेको थियो। मागको तुलनामा पूर्ति धेरै हुँदा भाउ सस्तिएको रेग्मीको भनाइ छ।
रेग्मीका अनुसार गिटी-बालुवाको मूल्य घटबढको निर्णय सरकारको हो। गत वर्ष फागुन-चैतको तुलनामा यतिबेला मूल्य धेरै सस्तिएको उनले बताए।
'सिजनका बेला भए पनि ठूला निर्माण क्षेत्र ठप्प छन्। साना तथा निजी निर्माणले मात्रै क्रसर उद्योग धानिन सक्दैन,' महासचिव रेग्मीले भने, 'उद्योग चलाउनकै लागि व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। माग कम भएपछि मूल्य घटाएर भए पनि बजार टिकाइरहेका छन्।'
काठमाडौंको कुरा गर्दा यहाँ धादिङको माधवबेसी, बैरेनी, गजुरी, काभ्रेको मेलम्ची, भकुण्डेबेसीतिरबाट गिटी-बालुवा आयात हुन्छ।
काभ्रेका तुलनामा धादिङको गिटी-बालुवा गुणस्तरीय हुने महासचिव रेग्मी बताउँछन्।
चार कोठाको एक तले घर बनाउँदा गिटी-बालुवामा कति लाग्छ खर्च?
गोल्डेन निर्माण एन्ड सप्लायर्सका प्रोपाइटर ऋषि खतिवडाका अनुसार एक तलाको चार कोठे घरका लागि १५ टिपर गिटी-बालुवा लागत अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया कालो गिटी र बालुवाको मूल्य उस्तै–उस्तै पर्छ। सामान्य अवस्थामा चार कोठाको एक तले घर बनाउँदा गिटी-बालुवामा करिब चार लाख रूपैयाँ खर्च अनुमान गर्नुपर्छ। दुई महिनाअघि यो लागत एक लाख बढी पर्थ्यो।
'चार आनामा बन्ने चार कोठे ढलान घर फिनिसिङ गर्न चार लाख लागत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ७ टिपर गिटी र ८ टिपर बालुवा भए सबै समेट्न सकिन्छ,' जानकारी दिँदै खतिवडाले भने, 'ढलानका लागि राम्रो बालुवा चहिन्छ। डबल वास बालुवा राम्रो मानिन्छ। प्लास्टरका लागि सामान्य बालुवा भए पनि हुन्छ।'
त्यस्तै छत ढलान नगरी बनाइने घरमा ३ लाख रूपैयाँ बराबरको गिटी-बालुवा अनुमान गर्नुपर्ने खतिवडाले बताए। उनका अनुसार धेरै मसला (गिटी-बालुवाको मिश्रण) ढलानमा खर्च हुनाले जस्ता पाता वा टायलका छाना राख्दा कम खर्चमा काम सकिन्छ।
'छतमा जस्ता वा टायल प्रयोग गर्ने हो भने एक तिहाइ गिटी-बालुवा कम गर्नुपर्छ। बाँकी काम ढलान गर्ने र जस्ता लगाउने दुवै घरमा उसैगरी गर्नुपर्छ,' खतिवडाले भने।
केही समययता काठमाडौंमा दिउँसो टिपर चलाउन निषेध छ। कोरोनाअघि बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म मात्रै उपत्यकाभित्र टिपर चलाउन पाइन्थ्यो। अहिले भने यो समय अझै साँघुरिएको छ।
क्रसर व्यवसायी महासंघका महासचिव रेग्मीका अनुसार कोरोनायता राति ९ बजेपछि बिहान ४ बजेसम्म मात्रै काठमाडौंको सडकमा टिपर चलाउन पाइन्छ।
'७–८ घन्टा मात्रै टिपर चल्न पाउँछन्। २४ घन्टामा एक ट्रिपभन्दा ढुवानी हुन पाउँदैन। श्रम खर्च बढी भइरहेको छ,' महासचिव रेग्मीले भने, 'यो नियमले व्यवसायी, टिपर चालक, घरधनी सबैलाई समस्यामा पारेको छ।'
दिउँसो पनि निर्वाध ढुवानीका साधन चल्न पाउने हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य अझै सस्तो हुने उनले दावी गरे।
'टाइम कार्ड दिएर वा अरू नै उपाय लगाएर २४ घन्टा टिपर चलाउन दिने हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य धेरै सस्तो पर्छ,' महासचिव रेग्मीले भने।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २२, २०७७, ०६:१३:००
अपार्टमेन्ट किन्दा माथिल्लो तला रोज्ने कि तल्लो? के छन् फाइदा, के बेफाइदा?
घरका साना-ठूला समस्या समाधान गरिदिने 'औजार'
शिलान्यास रिद्धि सिद्धिसँग
रिद्धी सिद्धी नुकड नाट्य यात्रा जारी
घर बनाउँदा सोचेभन्दा बढी खर्च हुन नदिन के गर्ने?
लकडाउनले मात्र थेग्दैन! अमित ढकाल
समय, सपना र ऊ मनोज समशेर भट्टराई
मृत्युवरण प्रजातन्त्रले पनि गरिरहेछ तीर्थरज अर्याल